Ma Kratom Legal halka aad ku nooshahay? Sharciyada Caalamiga ah & Regulations
Posted by Lyndon deed	 18 Comments
Kratom is a natural herb with an extensive range of benefits for mood, energy levels, stress iyo xanuun joojiye. Users who take Kratom capsules say that it improves their concentration, feejignaanta, drive maskaxda, dareen farxad, iyo nuglaato in walaaca iyo diiqadda. wax soo saarka warshadda ku salaysan ayaa la isticmaalay by malaayiin qof oo dunida oo dhan iyo waa kulan ka mid ah dhaqamada soo jireenka ah ee South East Asia. Waxaa loo arkaa amaan marka loo isticmaalo sida lagu faray oo la arko sida qalab waxtar leh ee daaweeyo bixitaanka opiat. Recently, ayaa muran badan oo ku saabsan xaaladda sharciga ah ee Kratom la siyaasiyiinta qaar riixaya ganaax on walax this. Wadamada qaarkood, growing the Kratom plant is considered illegal and some of the alkaloids found in its leaves are now listed as controlled substances. Ma Kratom sharci ee dalka aad deggan tahay iyo ma jiraan tixgelinno gaar ah waa in aad maskaxda ku hayso marka gadashada ama isticmaalkiisa?
Ma Kratom Legal?
United States: Kratom ma aha walaxda la kantaroolo ee USA iyo waxaa loo arkaa sharciga ah si ay u koraan, hantiyi iyo sida loo isticmaalo. Uma baahnid warqad si ay u iibsadaan iyo waxaa hadda ma nidaaminaya FDA. Sababta oo ah waxa aan la ansixiyay isticmaalka bini'aadamka, waxa aan la iibin karo ama calaamadaysan sida cuntokaabaha, laakiin waxa la iibin karo sida a qayb firfircoon cayriin. Qaar ka mid ah dalalka Maraykanka ayaa ka fiirsaneysa inay xeerarka sharciga ah si loo xakameeyo ay sale; waa in aad la maamullada maxalliga ah hubi in aad gobolka deggan ilaa akhbaartii ugu dambaysay ee xaalada sharci ee alaabta Kratom.
United Kingdom: Waxaad ka iibsan kartaa Kratom ee UK oo aan warqad iyo waxa aan hadda la qorsheeyay ama xaddidan. Waxaa jira qaar ka mid ah iibiya maxalliga ah budada Kratom iyo kaabsoosha UK, laakiin waxa ay u muuqdaan in ay wax badan ka qaalisan dukaano ku salaysan North American noqon.
Canada: Kratom waa sharci Kanada iyo waxa laga iibsan karaa, iibiyey oo loo isticmaalo iyada oo aan wax ka liidato.
Australia: In Australia, geed Mitragyna Speciosa iyo sidoo kale dhimirka Mitragynine laga helay Kratom ku qoran yihiin Jadwalka 9 of SUSDP ah. Go'aankan ayaa la dhigay bishii October ee sanadkii la soo 2003 kulanka Guddiga Qaranka ee Maandooriyaha iyo Sunta Schedule. Guddigu wuxuu u doortay inuu Kratom dhigi walaxda la kantaroolo, maxaa yeelay waxay rumaysteen oo waxay lahayd awood for xadgudubka, inkastoo xaqiiqda ah in Guddiga loo aqoonsan yahay in aanay jirin xaaladood oo xadgudub Mitragynine ayaa ka dhacay Australia.
Austria: Waqtigan xaadirka ah, Kratom waa sharci oo aan gacanta ku taal dalka reer Austria.
Belgium: Mitragyna Speciosa ma aha warshad gacanta ee Belgium iyo mid ka mid ahaa wada jir xaadirka ah in Kratom ayaa la qorsheeyey in dalka this. Kratom waa sharci iyo aadan u baahnayn warqad si ay u iibsadaan.
Brazil: isticmaalka Kratom waa sharci Brazil halkaas oo caleemaha geedka sidoo kale u yeela Kratom waxaa lagu gadaa by iibiya maxalliga ah.
Denmark: ilaa 2009, Denmark ogol yahay budo Kratom in la iibiyo oo aan raad sharci. Si kastaba ha ahaatee, xaalka ayaa hadda bedelay iyo geedo yaryar oo waxa ay hadda ku qoran sida walaxda la kantaroolo.
Finland: Sida ay sheegayaan wararka qaar ka mid ah, Finland waxay u baahan tahay warqad si ay u iibsadaan iyo isticmaalin waxyaabaha Kratom. Keenista geedka Finland kaloo sharci darro ah oo keeni doonta in aad shixnad lagu qabtay xadka.
Germany: Xaaladda qaanuun ee Kratom ee Germany waa xoogaa cadda, in qayb ay sabab u tahay xaqiiqda ah in sharciyada dhowaan bedelay. Hadda ka hor, dadka deegaanka Jarmal dajiyaan yaabaa Kratom dhib yar. Si kastaba ha ahaatee, doogga ayaa hadda lagu tilmaamay inay tahay daawo aan laysan lahayn iyo labada iibsadaan gudaha iyo kuwa caalamiga ah ayaa lagu gacanta ku hoos timaada Qeybta 73 Xeerka Daawooyinka ah. keeno shakhsiga ay u badan tahay in la kormeero by saraakiisha xuduuda oo Beeniyey la galo. Sharcigu wuxuu sidoo kale soo bandhigay rigoore laga yaabo in ay ka mid yihiin ganaax iyo xabsi for Jarmalka kuwaas oo si sharci darro ah ku dalban online.
Greece: isticmaalka Kratom aan sharci ee Giriigga iyo qaybaha kiimikada ee warshadda this la arkaa in ay la xakameyn walxaha hoos sharciga Greek.
Hungary: Iyada oo caleemo Mitragyna Speciosa aan la ansixiyay isticmaalka bini'aadamka, waxay waxaa lagu gadaa sida foox iyo waxaa laga heli karaa dukaamo madaxa ee Hungary.
Indonesia: Indonesia waa mid ka mid ah soo saarayaasha iyo dhoofinta ugu weyn ee Kratom adduunka iyadoo nooc badan hooyo in this dalka Asian Southeast. Waa sharci si ay u koraan iyo iibiyaan dalka iyo inta badan sahayda North American ah Kratom waa isha ka Indonesia. Waxaa jiray qaar ka mid ah warar aan la xaqiijin oo ku saabsan dhoofinta la hor istaagay for shixnad USA, laakiin nooc Indonesian sii wadi in la iibiyo oo ku riyaaqay oo adduunka ah.
Ireland: Waxaad ka iibsan kartaa Kratom degaanka ee Ireland sida ay tahay sharci iyo xeer looma sameynin by Irish Law Statute ama in ka Xun Drugs Act.
Italy: Waxaa jira macluumaad yar oo ku saabsan sharcinimada geedo yaryar this ee Italy; Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah dadka isticmaala Talyaani noo sheeg in ay sharci oo aan gacanta ku.
Malaysia: Kratom Waa sharci daro in la iibiyo ee Malaysia haddii aad leedahay liisanka dawladda.
Myanmar: In Myanmar ama Burma, warshad tani waa sharci-darro ah si ay u koraan iyo iibiyaan.
Netherlands: Sida aad ka fili karto, Kratom waa sharci Netherlands iyo lagu iibiyo smartshops sidoo kale ka iibiya Dutch online. Netherlands ayaa ah mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu weyn ee warshadda this in Europe.
New Zealand: Sida waafaqsan sharciga New Zealand, waxaad u baahan doontaa warqad haddii aad rabto in aad isticmaasho caleemo Mitragyna Speciosa. Waxaa lagu tilmaamay inay hoos Jadwalka isku 1 sida daawada ee Xeerka Shuruucda Daawooyinka Amendment ee 2009. Sharcigani wuxuu ka dhigaa sharci daro in la iibiyo Kratom shaqsiyaadka aan haysan warqad dhakhtar. Si kastaba ha ahaatee, tafsiiro qaarkood ayaa soo jeediyay in loo dhoofiyo iyo haysashada alaabta Kratom ma aha farsamo sharci-darrada ah ee New Zealand.
Romania: Kratom waa walax cusub mamnuucay in Romania sida 2010.
Russia: Waxa jira xoogaa wareera oo ku saabsan xaaladda sharciga ah ee isticmaalka Kratom ee Russia. Ilo Qaar waxay yidhaahdaan in weli waa sharci halka qaar kalena ay tixraacaan isbedel sharciga qaar ka mid ah waqtiga ku 2011.
Sweden: Waqtigan xaadirka ah, Kratom Waa sharci darro in la isticmaalo ee Sweden iyo waxa aan la qoran jadwalka daroogo kasta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira calaamado muujinaya in sharcigan isbeddeli karaan mustaqbalka.
South Korea: Sida ay sheegayaan wararka qaar ka mid ah, Kratom waa sharci darro dalkan iyo waxaa si xoogan loola nidaamiyo. dejinta sharci daradda ah waxaa loo ciqaabayaa la ciqaabo dembiyada.
Thailand: Thailand waa guriga hooyo geedka Kratom iyo waxa ay halkan loo isticmaalo qarniyo sida qayb ka mid ah dhaqanka daawo-dhaqameed. caleemo Mitragyna Speciosa ayaa sidoo kale caadi ahaan loo diyaariyey sidii shaah ah oo wuxuu wada baabbi'iyey cabitaan ahaan la mid ah qaxwada. Inkastoo isticmaalka baahsan ee Kratom ee Thailand, waxaa lagu tilmaamay inay tahay Heerka a 5 Narcotic taas oo ka dhigaysa sharci darro in ay koraan, lahaansho, iibiso ama gadashada. Waxaa jiray dhowr weydiimaha in soo jeedin sharcigan ayaa waxaa ugu horayn la aasaasay maxaa yeelay Kratom waxaa leexinayeen lacagta ka ganacsiga xashiishad qaali ah ee Thailand. Iyadoo Mitragyna Speciosa joogto ah loogu isticmaalaa by dadka dhaqanka, much of the so-called “Thai Kratom” now sold online actually comes from Indonesia or other nearby countries.
sheegay 5 sano ka hor
sheegay 4 sano ka hor
sheegay 3 sano ka hor
Sida of 2011 Kratom was made illegal to sell, purchase and possess. Please refer to http://www.irishstatutebook.ie/pdf/2011/en.si.2011.0553.pdf
Is kratom legal to ship into Serbia? Mahadsanid. Please show me your source of information — a link to it. I want to know for sure that a friend would be safe in shipping it there.
Sidaas, if I tour Europe with my band and with my kratom, I had better watch out? Some countries I can take it to, some I could go to jail? Hmm, just like the USA and going through certain states. Total bs!!